कांग्रेस चियापानमा नेकपा नेताका रमाइला... :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असोज २६
तस्बिर : रोशन सापकोटा
नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'राष्ट्रपति सीको भ्रमणले असल छिमेकी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाएको छ। नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। यसले नेपाल र चीनको बीचमा आर्थिक समझदारी र साझेदारीका प्रयास पनि अघि बढाएको छ।'
'नेपाली कांग्रेसजस्तो जेठो लोकतान्त्रिक पार्टीले समृद्ध नेपालका लागि जिम्मेवारी बहन गर्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छु,' उनले भने।
'हाम्रा विदेशी पाहुना आउँदा खाली केटाकेटीका मामा आउँदा मामाले के ल्याइदिए, के-कति मिठाइ दिए, कति दक्षिणा दिए भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सामरिक हितमा राखेर हुनुपर्छ।' नेताहरू बोलेपछि प्रष्ट नभएमा र थप प्रश्न गर्नुपरे पत्रकारहरूलाई प्रश्न राख्ने समय पनि दिइएको थियो।
पत्रकारले सोधेको सभामुखबारेको प्रश्नमा भट्टराईले भने, 'संविधानअनुसार नै सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र लिंगको हुनुपर्छ।'
'शेरबहादुर देउवाजी र म विगत ४५ वर्षदेखि साथी छौं, हामीसँगै जेल पनि बसेका छौं,' उनले भने, 'लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि हामीसँगै लडेका छौं। रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महतलगायत अरू साथीहरू साढे चार दशकदेखिको लोकतन्त्रको सहयात्रालाई तलमाथि गर्न नदिने यात्रामा छौं।'
'सम्बन्ध बिग्रियो भने पनि यस्ता कार्यक्रमले सुधार गर्छ। म निम्ता मान्न आएपछि सम्बन्ध बिग्रेको भए पनि सुध्रिन्छ,' उनले भने, 'नेपाली कांग्रेसका सबै मित्रहरूलाई जय नेपाल।'
'अहिले शुभकामना आदानप्रदानका बेला धूलो चकमक लगाउने कुरा नगरौं,' यति भनेपछि प्रधानमन्त्रीले पाँच मिनेटको सम्बोधन सके।
कांग्रेसले व्यवस्थित चियापान गरेको भन्दै नेता नेपालले भने, 'कार्यक्रम व्यवस्थित भएछ, नभए कांग्रेसका कार्यक्रम व्यवस्थित हुँदैन। यसपटक कम्युनिष्टबाट सिक्नुभयो राम्रै भएको छ। एकअर्काका राम्रा कुरा ग्रहण गरौं।'
नेता नेपालले भने आफैंले पत्रकारहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ? भनेर सोधे। अनि उनैले थपे, 'जय नेपाल। जय नेपाल कसले भन्दैन? नेपाली भएर। माधव नेपाल भन्या होइन मैले, जय नेपाल भनेको हुँ।'
'चीनको विकास सिक्नका लागि यस्तो भ्रमण आवश्यक ठानिएको थियो,' उनले भने, 'अनेक सम्झौता कहिले कांग्रेस र कहिले कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको छ। चीनप्रति हाम्रो कुनै दुविधा छैन।'
दसैं, तिहार, छठ लगायतको शुभकामना दिँदै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले व्यवस्थित र अनुशासित रूपले कांग्रेसले चियापान गरेकोमा प्रशंसा गरे। 'राजनीति यस्तै नै हो। असंभव भन्ने कुरा केही हुँदैन, सहकार्यबाट संभव बनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'कांग्रेसको बीचमा आउँदा मलाई सहयात्रीहरूकै बीचमा आएजस्तो हुन्छ। हेर्दै जाउँ आउने दिनमा राजनीतिले कसरी कोल्टे फेर्दै जान्छ।'
पत्रकारहरूले सरकारबारे सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिएका प्रचण्डले भने, 'अहिले दुई तिहाइको कुरा नगरौं, धन्यवाद।'
पत्रकारहरूले सीसँगको भेटबारे सोधेको प्रश्नमा देउवाले भने, 'राष्ट्रपति सीले चीन भ्रमणको निम्ता दिनुभएको छ, म जान्छु।'
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज २६, २०७६, १९:१०:००